अब परियोजना धितो राखेरै पाइन्छ ३ लाखदेखि ५ करोडसम्म ऋण | EDev News
Home अर्थ/वाणिज्य अब परियोजना धितो राखेरै पाइन्छ ३ लाखदेखि ५ करोडसम्म ऋण
अब परियोजना धितो राखेरै पाइन्छ ३ लाखदेखि ५ करोडसम्म ऋण
के तपाई व्यापार व्यवसाय गर्ने धुनमा हुनुहुन्छ ? अनि चारतिर बैंक र वित्त संस्था धाउँदा पनि ऋण नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? नआतिनुहोस तपाईको साथमा छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक । उक्त बैंकले सरकारले ल्याएको एकीकृत सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमको विधिवत रुपमा शुभारम्भ गरेको छ ।
यस प्रकारको कर्जा लिनका तपाईसँग भएको परियोजना धितोमा राख्नुपर्दछ । बैंकले सोमबारबाट लागू हुनेगरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । बैंकले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी २ जना सेवाग्राहीलाई सहुलियत कर्जा वितरणको शुभारम्भ गरेको हो । प्रथम चरणमा कलंकी शाखाबाट रजनी हायूले उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिएकी छिन् । ५ लाख रुपैयाँ उनी पढिरहेको कलेजलाई उपलव्ध गराएको हो । यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत वीपी तन्दुरी क्यान्टिनका सञ्चालक भीमप्रसाद अधिकारीले रु ७ लाख कर्जा सहुलियत व्याजदरमा लिएका छन् । स्वीकृत शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा गरी २ जनालाई संचारसचिव तथा बैंकका सञ्चालक समेत रहेका महेन्द्र गुरुङले हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अधिकतम ३‍ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा दिन सुरु गरेको छ । बैंकले सरकारले ल्याएको एकीकृत सहुलियत कर्जा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित परियोजना धितोमा प्रदान गरिने कर्जाको वितरण सुरु गरेको हो ।
बैंकले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालन कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकको कर्जामा ३ दशमलव ३३ प्रतिशत र महिला उद्यमशीलता कर्जामा २ दशमलव ३३ प्रतिशत ब्याजसहित अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।
बैंकका अनुसार निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि आफूले लिन चाहेको कर्जाको प्रकार, रकम र आवश्यक कागजातसहित आफ्नो नजिकको शाखामा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
Previous articleविनयजंग बस्नेतको आँट ,ऋषि धमलाको साथ
Next articleकहाँबाट चुहियो मन्त्रिपरिषद्को यी निर्णय ?